Mpamosavy walpurgis pejy fandokoana pejy - pejy fandokoana maimaim-poana
Mpamosavy alina walpurgis pejy fandokoana
Mila fitaomam-panahy tsy tapaka ny ankizy. Ny pejy fandokoana sy ny boky fandokoana dia mandray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-mamorona ny zanatsika faralahy. Tsy misy fitsipiky ny ankihibe raha toa ka efa antitra ny zaza vao afaka manomboka mandoko na rehefa tokony hanomboka hoso-doko tanteraka izy ireo. Na izany aza, zava-dehibe foana ny pejy fandokoana atolotra dia natao ho an'ny ankizy.
Pejy fandokoana Alina Walpurgis
Walpurgis Night no alina hatramin'ny 30 aprily ka hatramin'ny 1 mey izay, araka ny angano, mpanao ody ao amin'ny Harz Mountains dia manao fety lehibe. Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny endrika pdf ny modely fandokoana:
Sokafy ny sary fandokoana Walpurgis Night amin'ny endrika lehibe toy ny sary
Mpamosavy pejy fandokoana amin'ny Walpurgis Night | Zavaboary angano
Mpamosavy Halloween mpamorona pejy